Microsoft Surface Tablet က အိပ်ကပ်ထဲခေါက်ပြီးထည့်သွားလို့ရတော့မှာလား?
30 Jun 2018 . 2:27 PM
Microsoft ကနေ Codename Andromeda လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ Surface Device တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်နေတာ နှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု Surface Device က ဒီနှစ်တွေထဲမှာ များစွာသော မူပိုင်ခွင့်တွေ၊ သတင်းတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပြီးတော့ Dual Display ဒီဇိုင်းနဲ့ ထွက်လာမယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေမြောက်များစွာ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ အဆိုပါ Suface Device နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ Microsoft ရဲ့ ရုံးအတွင်းပိုင်း စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေါက်ကြားလာခဲ့ပြီးတော့ အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်းအရ အခုထွက်ရှိလာမယ့် Surface Device ဟာ အိတ်ကပ်ထဲထည့်သွားလို့ရတဲ့ Surface Device တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Microsoft Project Andromeda 3D Render
Microsoft က အခု Project Andromeda ကို လက်ရှိ Microsoft ကနေ ခွဲထွက်လာမယ့် Device တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ PC နဲ့ Mobile ကြားထဲကို ဝင်ရောက်လာမယ့် Device တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ ယူဆထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပေါက်ကြားလာတဲ့ စာရွက်စာတမ်းမှာလည်း Andromeda ကို “အိပ်ကပ်ထဲထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ အရွယ်အစားတစ်ခုနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမြင့်မားတဲ့ Hardware နဲ့ Software တို့ပေါင်းစပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် မျိုးစုံဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ Computing Experience တစ်ခုကို ရရှိစေမယ်” လို့ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft ဟာ အလားတူဖောက်ထွက်မှုမျိုးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်တုန်းက Surface RT နဲ့ Surface Pro တို့နဲ့ အတူ Tablet နဲ့ Laptop ၂ ခု ကြားထဲက Category တစ်ခုအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် PC Maker တွေတင်သာမကပဲ Apple iPad Pro လိုမျိုး Devices တွေကပါ Surface ရဲ့ လမ်းကြောင်းနောက်ကို လိုက်လာကြပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခု Project Andromeda ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်တုန်းက Surface လိုမျိုးပဲ စမတ်ဖုန်းနဲ့ PC ကြားထဲကို ဝင်ရောက်လာမယ့် Device တစ်ခုအဖြစ် ရည်ရွယ်နေပုံရပါတယ်။
Andromeda Device အသစ်က လက်ရှိ Microsoft ဆီမှာပဲ လျို့ဝှက်စွာနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ ပုံစံအရ Display ၂ ခုကို ခေါက်ထားမယ့် ဒီဇိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် Display ၂ ခုကို ဖြန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Display ၂ ခုကြားထဲက Gap မရှိစေဖို့အတွက် Microsoft က ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပုံပါပဲ။ အခု Project Andromeda ကို David Breyer ကနေ 3D Concept အနေနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Microsoft ဟာ အခု Project Andromeda ကို လက်ရှိ Surface Devices တွေလိုမျိုးပဲ Pen Support ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ အိတ်ကပ်ထဲထည့်သွားလို့ရမယ့် Device တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာမယ့်အတွက် Microsoft က တကယ်လို့ အရေးတကြီး Note ရေးစရာရှိရင် Pen နဲ့ပါ ချက်ချင်းချရေးနိုင်အောင် စဉ်းစားနေပုံပါပဲ။ Processor ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Microsoft က ARM Based Processor ကိုလည်း စမ်းသပ်နေတယ်လို့သိရတဲ့အတွက် Final Product က Intel Processor သုံးလာမှာလား? Qualcomm ရဲ့ ARM Processor အသစ်ကိုပဲ သုံးလာမလားကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
Microsoft ရုံးတွင်းပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ စာရွက်စာတမ်းအရတော့ Microsoft ဟာ အခု Project Andromeda Device ကို ယခုနှစ်အတွင်းမှာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားဖို့ စီစဉ်နေပြီးတော့ မကြာခင်မှာ Microsoft နဲ့ ပါတနာအဖြစ်တွဲဖက်လုပ်ကောင်နေတဲ့ PC Maker တွေက ထုတ်လုပ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Dual Display Device တွေကို Microsoft တစ်ဦးတည်းဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ပဲ Intel ကလည်း အလားတူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Intel ကိုယ်တိုင်ကလည်း Dual Display နဲ့ Prototype တွေထုတ်လုပ်ခဲ့ဖူးသလို Asus ကလည်း Project PRECOG ကို ပြသထားပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ Asus PRECOG ကတော့ နောက်နှစ်မှာ ဈေးကွက်အတွင်းကို ရောင်းချမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့သလိုပဲ Lenovo ကလည်း အလားတူ Dual Display Device တွေကို ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် ဘယ်သူက အခု Dual Display Device တွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
Microsoft ကနေ Codename Andromeda လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ Surface Device တဈခုကို ဆောငျရှကျနတော နှဈနှဈနီးပါးရှိနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။ အခု Surface Device က ဒီနှဈတှထေဲမှာ မြားစှာသော မူပိုငျခှငျ့တှေ၊ သတငျးတှမှော ပါဝငျခဲ့ဖူးပွီးတော့ Dual Display ဒီဇိုငျးနဲ့ ထှကျလာမယျဆိုပွီး သတငျးတှမွေောကျမြားစှာ ထှကျပျေါခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာ အဆိုပါ Suface Device နဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ Microsoft ရဲ့ ရုံးအတှငျးပိုငျး စာရှကျစာတမျးတဈခုပေါကျကွားလာခဲ့ပွီးတော့ အဆိုပါ စာရှကျစာတမျးအရ အခုထှကျရှိလာမယျ့ Surface Device ဟာ အိတျကပျထဲထညျ့သှားလို့ရတဲ့ Surface Device တဈခုဖွဈလာမယျလို့ သိရပါတယျ။
Microsoft က အခု Project Andromeda ကို လကျရှိ Microsoft ကနေ ခှဲထှကျလာမယျ့ Device တဈခုဖွဈလာပွီးတော့ PC နဲ့ Mobile ကွားထဲကို ဝငျရောကျလာမယျ့ Device တဈခုဖွဈမယျလို့ ယူဆထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ပေါကျကွားလာတဲ့ စာရှကျစာတမျးမှာလညျး Andromeda ကို “အိပျကပျထဲထညျ့သှငျးနိုငျတဲ့ အရှယျအစားတဈခုနဲ့ တီထှငျဆနျးသဈမှုမွငျ့မားတဲ့ Hardware နဲ့ Software တို့ပေါငျးစပျပွီး ကိုယျပိုငျ မြိုးစုံဆောငျရှကျနိုငျတဲ့ Computing Experience တဈခုကို ရရှိစမေယျ” လို့ ရေးသားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Microsoft ဟာ အလားတူဖောကျထှကျမှုမြိုးကို လှနျခဲ့တဲ့ ၆ နှဈတုနျးက Surface RT နဲ့ Surface Pro တို့နဲ့ အတူ Tablet နဲ့ Laptop ၂ ခု ကွားထဲက Category တဈခုအနနေဲ့ ဝငျရောကျခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ PC Maker တှတေငျသာမကပဲ Apple iPad Pro လိုမြိုး Devices တှကေပါ Surface ရဲ့ လမျးကွောငျးနောကျကို လိုကျလာကွပွီလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ အခု Project Andromeda ကလညျး လှနျခဲ့တဲ့ ၆ နှဈတုနျးက Surface လိုမြိုးပဲ စမတျဖုနျးနဲ့ PC ကွားထဲကို ဝငျရောကျလာမယျ့ Device တဈခုအဖွဈ ရညျရှယျနပေုံရပါတယျ။
Andromeda Device အသဈက လကျရှိ Microsoft ဆီမှာပဲ လြို့ဝှကျစှာနဲ့ ဆောငျရှကျနတောဖွဈပွီးတော့ ပုံစံအရ Display ၂ ခုကို ခေါကျထားမယျ့ ဒီဇိုငျးဖွဈနတေဲ့အတှကျ Display ၂ ခုကို ဖွနျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ Display ၂ ခုကွားထဲက Gap မရှိစဖေို့အတှကျ Microsoft က ဆောငျရှကျနရေတဲ့ပုံပါပဲ။ အခု Project Andromeda ကို David Breyer ကနေ 3D Concept အနနေဲ့ ပုံဖျောထားတဲ့ ဒီဇိုငျးကိုလညျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Microsoft ဟာ အခု Project Andromeda ကို လကျရှိ Surface Devices တှလေိုမြိုးပဲ Pen Support ရရှိအောငျဆောငျရှကျနပွေီးတော့ အိတျကပျထဲထညျ့သှားလို့ရမယျ့ Device တဈခုလညျး ဖွဈလာမယျ့အတှကျ Microsoft က တကယျလို့ အရေးတကွီး Note ရေးစရာရှိရငျ Pen နဲ့ပါ ခကျြခငျြးခရြေးနိုငျအောငျ စဉျးစားနပေုံပါပဲ။ Processor ပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ Microsoft က ARM Based Processor ကိုလညျး စမျးသပျနတေယျလို့သိရတဲ့အတှကျ Final Product က Intel Processor သုံးလာမှာလား? Qualcomm ရဲ့ ARM Processor အသဈကိုပဲ သုံးလာမလားကတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ။
Microsoft ရုံးတှငျးပေါကျကွားခဲ့တဲ့ စာရှကျစာတမျးအရတော့ Microsoft ဟာ အခု Project Andromeda Device ကို ယခုနှဈအတှငျးမှာ ထုတျလုပျရောငျးခသြှားဖို့ စီစဉျနပွေီးတော့ မကွာခငျမှာ Microsoft နဲ့ ပါတနာအဖွဈတှဲဖကျလုပျကောငျနတေဲ့ PC Maker တှကေ ထုတျလုပျလာမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အခုလိုမြိုး Dual Display Device တှကေို Microsoft တဈဦးတညျးဆောငျရှကျနတောမဟုတျပဲ Intel ကလညျး အလားတူဆောငျရှကျနတောဖွဈပါတယျ။ Intel ကိုယျတိုငျကလညျး Dual Display နဲ့ Prototype တှထေုတျလုပျခဲ့ဖူးသလို Asus ကလညျး Project PRECOG ကို ပွသထားပွီးဖွဈနပေါတယျ။ Asus PRECOG ကတော့ နောကျနှဈမှာ ဈေးကှကျအတှငျးကို ရောငျးခမြယျလို့ ပွောကွားခဲ့သလိုပဲ Lenovo ကလညျး အလားတူ Dual Display Device တှကေို ဆောငျရှကျနတေယျလို့ သိရတဲ့အတှကျ ဘယျသူက အခု Dual Display Device တှကေို အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျနိုငျမလဲဆိုတာကတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ။